Amatikiti oQeqesho amaxabiso aphantsi amaCFL namaxabiso ohambo | Gcina A Isitimela
Amatikiti oQeqesho amaxabiso aphantsi amaCFL namaxabiso ohambo
ekhaya > Amatikiti oQeqesho amaxabiso aphantsi amaCFL namaxabiso ohambo
Apha unokufumana lonke ulwazi malunga Amatikiti etreyini amaxabiso aphantsi yaye Amaxabiso okuhamba e-CFL kunye nezibonelelo.
izihloko: 1. I-CFL ngeeNgcaciso zoLoliwe
2. Malunga neCFL 3. Ingcaciso ephezulu yokufumana itikiti lamaxabiso aphantsi oqeqesho lweCFL
4. Axabisa malini amatikiti eCFL 5. Iindlela zokuhamba: Kutheni kungcono ukusebenzisa oololiwe beCFL, kwaye ungahambi ngenqwelomoya
6. Uyintoni umahluko phakathi kwexesha elifutshane, Amatikiti oSuku kwiCFL 7. Ngaba kukho umrhumo weCFL
8. Kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba ihambe i-CFL 9. Zithini iishedyuli zoololiwe zeCFL
10. Zeziphi izitishi ezihanjiswa yi-CFL 11. I-CFL FAQ
I-CFL ngeeNgcaciso zoLoliwe
Ngomgangatho ophezulu wokufika ngexesha 96%, I-CFL (Inkampani esemthethweni kaloliwe yaseLuxembourg) ngomnye wabaqhubi kaloliwe abanokuthenjwa eYurophu.
Qho ngonyaka, I-CFL ithatha 25 yezigidi zabantu kwaye 105 yezigidi zeetoni zempahla ukuya kwiindawo zabo ngaphakathi eLuxembourg nakwiYurophu iphela.
ICFL inobuhlobo kwindalo, CO2-yasimahla, yaye 100% wabo bonke umbane ufumaneka kumandla ahlaziyekayo.
I-CFL yeyona nkonzo inkulu yokuhambahamba yaseLuxembourg.
I-CFL, Umbutho weSizwe woLoliwe baseLuxembourg, lelinye igama lesikhululo sikaloliwe saseLuxembourg. Oko yasungulwa phakathi 1946, I-CFL ibonelele ngeenkonzo zokuhamba kubemi baseLuxembourg.
Izibonelelo zeCFL iinkonzo zikaloliwe ngaphakathi kweLuxembourg nakwiYurophu iphela. Ngetikiti elifanelekileyo, ungandwendwela konke okuhle iindawo zeholide eYurophu. Ngeendidi ezahlukeneyo zamatikiti, ICFL ilungiselela iimfuno zabantu bonke.
Oololiwe be-CFL abahamba rhoqo kwimizila kaloliwe, Laksembheg – EBrussels, Laksembheg – EParis, Ettelbruck – Liege, UWasserbillig- Dusseldorf. Unokufika kumazwe angabamelwane ngaphakathi kweYurophu usebenzisa oololiwe beCFL: Fransi , Jemani , no Belgium.
Ngaphesheya kombutho, 3,090 Abasebenzi basebenza kuloliwe ukuqinisekisa ukuba ezinye izigidi zabakhweli zifikelela ngokukhuselekileyo kwiindawo eziya kuzo yonke imihla.
Yiya e Gcina iKhaya leLoliwe okanye usebenzise lewijethi ukukhangela uqeqesha amatikiti eCFL:
– Gcina i-App yoLoliwe ka-iPhone
– Gcina iApp App yoQeqeshi
Umhla wokuBuya (Inketho)
Indoda enkulu (26-59):
Ingcaciso ephezulu yokufumana itikiti lamaxabiso aphantsi oqeqesho lweCFL
inombolo 1: Bhukisha amatikiti akho e-CFL kwangaphambili kangangoko unako
Ixabiso Amatikiti kaloliwe e-CFL iyaqhubeka njengoko usuku lokuhamba lusondela. Ungonga imali ngokubhukisha iitikiti zakho zikaloliwe zeCFL kude kangangoko kunokwenzeka kusuku lokunduluka (Ngokwesiqhelo 3 Iinyanga ezizayo zezona ziphezulu). Ukubhukisha kwangethuba kuqinisekisa ukuba ufumana elona xabiso libiza kancinane leetikiti likaloliwe zeCFL. Banqunyelwe nenani, kwangoko uyalela, Ixabiso eliphantsi kuwe. Ukuze songe imali kumatikiti etreyini eCFL, Thenga amatikiti akho kwangoko.
inombolo 2: Ukuhamba nge-CFL ngexesha lokuhamba
Njengaye wonke umqhubi kaloliwe, Amatikiti kaloliwe e-CFL Ixabiso eliphantsi ngexesha lokuncama, ekuqaleni kweveki, nasemini. Unokuqiniseka ukuba uyifumana amatikiti etreyini ingabizi phakathi evekini. Ngolwesibini, uLwesithathu, nangoLwesine, Amatikiti kaloliwe e-CFL zezona zinemali eninzi. Ngenxa yevolumu ye zabahamba Ukuya emsebenzini kusasa nangokuhlwa, amatikiti etreyini abiza ngaphezulu kuninzi lwamaxesha. Kuxabiso eliphantsi kakhulu ukuhamba ngalo lonke ixesha phakathi kokusa kunye nangokuhlwa. Ngeempelaveki lelinye ixesha eliphakamileyo loololiwe, ngakumbi ngolwesiHlanu nangoMgqibelo. Amaxabiso etikiti likaloliwe e-CFL nawo ayenyuka iiholide zikawonke-wonke kunye neeholide zesikolo, kwaye iiholide zesikolo eYurophu zinokuhlala 3 iiveki ixesha ngalinye.
inombolo 3: Odola amatikiti akho eCFL xa uqinisekile ngeshedyuli yakho yohambo
Oololiwe beCFL Bafunwa kakhulu, kunye nokhuphiswano oluncinci, kungoku nje bahlala bekhetha oololiwe abaseLuxembourg. Banokukwazi ukuseta izithintelo zetikiti likaloliwe njengaleyo ethintela ukutshintshwa kwetikiti okanye ukubuyiselwa imali ngaphandle kokuba luhlobo lweShishini lwetikiti likaloliwe. Nangona kusekho iwebhusayithi apho unokuthengisa khona amatikiti akho asebenzisana nabantu, I-CFL ayikuvumeli ukuthengiswa kwetikiti lesibini. Kukunceda njani oku ukugcina imali? Uku-odola itikiti lakho xa uqinisekile ngeshedyuli yakho kuya kukugcinela ukubhukisha itikiti elinye kabini kuba kukho into evelileyo kwaye ngekhe usebenzise itikiti elithengiweyo loqobo.
inombolo 4: Thenga amatikiti akho e-CFL kuGcina uLoliwe
Gcina uloliwe ngowona mkhulu, egqibelele, kunye nezona ndleko zixabiso eliphantsi kwitikiti laseYurophu. Ulwalamano lwethu oluhle kunye nabaqhubi kaloliwe abaninzi, yeyiphi imithombo yetikiti likaloliwe, kunye nolwazi lwethu ngobuchwephesha obuchaphazelekayo, sinike ukufikelela kweyona ntengo iphantsi yetikiti likaloliwe. Asinikezeli ngeentengo zexabiso lamatikiti etreyini zeCFL kuphela; sibonelela ngokufanayo kwezinye iindlela kwi-CFL.
ILuxembourg ukuya kumaxabiso oololiwe eColmar
ILuxembourg iya kwiBrussels Amaxabiso oololiwe
I-Antwerp ukuya kumaxabiso oLoliwe aseLuxembourg
I-Metz ukuya kumaxabiso oLoliwe aseLuxembourg
Axabisa malini amatikiti eCFL?
Ukuhanjiwa kawonke-wonke ngaphakathi Grand Douchy waseLuxembourg ngamanye amaxesha simahla kwaye ngamanye amaxesha akunjalo, kuxhomekeke kwindlela kwaye ukuba ungummi. kunjalo, 1iklasi koololiwe beCFL, soloko ibiza imali, kodwa kananjalo ayilulo ukhetho olubizayo. Amatikiti kaloliwe e-CFL aqala ukusuka kwi-3 ukuya kwi-6 euros kuhambo olunye lololiwe. the Ixabiso letikiti likaloliwe leCFL kuxhomekeka kuhlobo luni lwetikiti olithengayo kunye nokuba ukhetha ukuhamba nini:
Ixesha elifutshane € 3
Itikiti losuku € 6
Iindlela zokuhamba: Kutheni kungcono ukusebenzisa oololiwe beCFL, kwaye ungahambi ngenqwelomoya
1) Uhlala ufika kwiZiko lesiXeko. Le yenye yeenzuzo zoololiwe beCFL xa kuthelekiswa neenqwelo moya. Oololiwe be-CFL kunye nako konke olunye uhambo ngololiwe ukusuka naphi na esixekweni kuye kumbindi wedolophu elandelayo. Iyakongela ixesha kunye neendleko zekhithi ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kumbindi wesixeko. Ngokuma kwezitimela, Kulula ukuba ufike naphi na kwisixeko oya kuso. Ayinamsebenzi ukuba usuka phi, EBrussels, uNancy, EParis, okanye iAmsterdam, Indawo ekumiswa kuyo isixeko sisixhobo esikhulu soololiwe beCFL! Umzekelo, Isikhululo senqwelomoya saseLuxembourg 20 imizuzu ukusuka kumbindi wesixeko.
2) Ukuhamba ngenqwelomoya ngenqwelomoya kufuna ukuba ube kwisikhululo seenqwelomoya okungenani 2 iiyure ngaphambi kwexesha lakho lokubaleka. Kuya kufuneka ukhangele ukhuseleko ngaphambi kokuba uvunyelwe ukuba ukhwele inqwelomoya. Ngoololiwe beCFL, Kufuneka ube kwisikhululo ngaphantsi 30 imizuzu ngaphambi kwexesha. Xa ujonge nexesha ekuthatha ngalo ukuya kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kumbindi wesixeko, uyakuqonda ukuba oololiwe be-CFL bangcono kwi ngokwexesha lokuhamba lilonke.
3) Amatikiti kaloliwe e-CFL axabiso eliphantsi nokuba uthelekisa amatikiti omoya. Ngaphezu, xa uthelekisa zonke iintlawulo ezichaphazelekayo, Amatikiti kaloliwe e-CFL anamaxabiso angcono. Ngezinye iindleko ezinjengemirhumo yemithwalo ekungafuneki ukuba uyihlawule koololiwe, uhamba ngeCFL kugqibelele.
4) Oololiwe banobuhlobo kokusingqongileyo. Xa kuthelekiswa phakathi koololiwe kunye neenqwelo moya, oololiwe baya kuhlala bephuma ngaphezulu. Iinqwelomoya iindiza ziwungcolisa umoya ubushushu bawo ngamanqanaba aphezulu ekhabhoni ayinikelayo. Uloliwe ngokuthelekisa uyakhupha Ikhabhoni ingama-20x ngaphantsi kuneenqwelomoya.
Uyintoni umahluko phakathi kwexesha elifutshane, kunye neTikiti leMini kwiCFL?
I-CFL ineentlobo ezahlukeneyo zamatikiti kuhlahlo-lwabiwo mali olwahlukeneyo kunye nexesha lokuhamba: Nokuba lishishini okanye lolonwabo. Unokuqiniseka ukuba elinye lala matikiti liya kuba lilungele uhambo lwakho lweklasi lokuqala ngaphesheya kweLuxembourg ngoololiwe besizwe beCFL.
Ixesha elifutshane Amatikiti eCFL:
Itikiti lexeshana lisebenza kwiklasi ye-1 kuphela 2 iiyure ukusukela kumzuzu wokuqinisekiswa. Unokuhamba ngenethiwekhi yololiwe ye-CFL ngaphandle kwezithintelo kodwa uthathe ixesha lokufika koololiwe ukuya kwindawo ekuyiwa kuyo, ngokwesicwangciso samaxesha. Ukuba kufuneka uhambe ngesaziso esifutshane, kuya kufuneka ufumane eli tikiti. Awupheleli kuqeqesho oluthile, kwaye uvunyelwe ukukhetha unxibelelwano lwakho.
I-CFL Amatikiti oSuku:
Amatikiti eSuku lweCFL athatha ixesha elide kwiklasi yokuqala yeklasi yokuqala, kwaye zisebenza ukusukela kumzuzu wokukhutshwa kude kube 4 ndingumhla olandelayo. Ungathenga itikiti loLoliwe loSuku lweCFL kumatshini wetikiti, iofisi yetikiti, okanye Gcina uloliwe.
Ngaba kukho umrhumo weCFL?
Ukuhanjiwa kawonke-wonke, kubandakanya iinkonzo zoololiwe ezikhethiweyo zeCFL, ngaphakathi eLuxembourg, isimahla. ngoko ke, akukho mfuneko yobhaliso lweCFL, Ngaphandle kokuba ukhetha ukuhamba kwiklasi yokuqala. Abemi baseLuxembourg abahlala bewela umda besiya eFrance, Ungayonwabela iFlexway 1 yeklasi yokupasa ngenyanga, ngenxa 85 €. Ukwengeza, Abemi baseLuxembourg banokonwabela amaxabiso asezantsi kwiitikiti zenyanga ukuya eJamani. Ke apho unokufumana khona ulwazi olongezelelweyo malunga noku?
– Izinto zokubala zamatikiti eCFL.
– Kwifowuni yenkonzo yabathengi yeCFL 2489 2489
Kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba ihambe i-CFL?
Kunzima ukutsho ngokuchanekileyo kwisibini, kodwa Gcina uloliwe ucebisa ukuba ufike malunga 30 imizuzu ngaphambi kwexesha lakho lokuhamba. Ngeli xesha libekiweyo, uya kuba nexesha elaneleyo lokuthenga izinto ekufuneka uzenzile yenza uhambo lwakho ngololiwe ngokulula kangangoko kunokwenzeka.
Zithini iishedyuli zoololiwe zeCFL?
Ungalufumana okwenyani kwiphepha lethu lasekhaya kwiSitimela soLoliwe. Chwetheza kwindawo yakho yangoku kunye nendawo oyifunayo, kwaye singakubonisa ulwazi.
I-Luxembourg ukuya kumaxabiso oQeqesho eCologne
I-Luxembourg ukuya kumaxabiso oLoliwe eKoblenz
EParis ukuya kumaxabiso eLoliwe aseLuxembourg
IBrussels ukuya eLuxux Amaxabiso oololiwe
Zeziphi izitishi ezihanjiswa yi-CFL?
Isikhululo seCFL saseLuxembourg sikwiPearl de la Gare esikumbindi wesixeko.
KwiiTroisvierges, Oololiwe beCFL hamba kwaye ufike kwisikhululo seTroisvierges esikulayini 10, idibanisa isixeko saseLuxembourg kumantla elizwe. ITroisvierges likhaya kwiinduli ezimbini eziphakamileyo eLuxembourg.
Oololiwe be-CFL bayemka kwaye bafike kwisixeko saseNancy eFrance. Oololiwe be-CFL basuka kwisikhululo saseLuxembourg esiyi-Nancy rhoqo 1 yure.
Unokuyifumana iFlanders eBelgium ngololiwe ukusuka eLuxembourg ukuya eGhent kunye / okanye eBrussels. Oololiwe be-CFL bahamba iyure nganye ukusuka eLuxembourg ukuya kwiidolophu ezimangalisayo zaseBelgium kwaye Iidolophu ezindala ezinomtsalane eYurophu.
Ngaba iiBikes zivumelekile kwiBhodi Oololiwe be-CFL?
Iibhayisikile zivunyelwe koololiwe be-CFL simahla, kwaye nje ukuba uzigcine kwizithuba ezichongiweyo zeebhayisikile. Ungazifumana iibhayisekile zokugcina indawo ngokumakisha okuluhlaza kwiminyango yeCFL.
Ngaba abantwana bahamba simahla koololiwe beCFL?
Ewe, kodwa kuphela ukuya kubudala be 12 iminyaka. Abantwana abancinci kuna 12 iminyaka, bangahamba simahla ukuba bakhatshwa ngumntu omdala kunawe 12, itikiti elisebenzayo kunye nekhadi lokuzazisa.
Ngaba Izilwanyana zasekhaya zivunyelwe koololiwe beCFL?
Ewe, I-CFL iyazithanda izinja zobungakanani bonke kwaye ezi 4 Abantu abanemilenze banokuhamba simahla koololiwe beCFL. Izinja kufuneka zikhokelwe kwaye azivumelekanga ukuba zihlale ezitulweni.
Zithini iinkqubo zokubhoda zeCFL?
Wonke umgibeli makabonise itikiti elisemthethweni kunye nekhadi lokuzazisa. Ukuba ulahlekelwe litikiti lakho lololiwe okanye ungxamile, kwaye khange uthenge itikiti kwangaphambili, ungayenza kuloliwe, kubameli beCFL.
Eyona FAQ iceliweyo – Ngaba kuya kufuneka ndi-odole isihlalo kwangaphambili kwi-CFL?
Hayi, akukho kugcinwa kwesihlalo koololiwe be-CFL besizwe okanye bamazwe aphesheya, uhlala apho unendawo yasimahla, kwaye uya kuhlala unendawo yasimahla ukuba uthenge itikiti likaloliwe kwangaphambili.
Ngaba ikhona i-intanethi ye-Wi-Fi koololiwe beCFL?
Hayi. Unokonwaba I-intanethi yasimahla ye-Wi-Fi kwizikhululo zikaloliwe zeCFL ezikhethiweyo, kodwa iWi-Fi ayifumaneki koololiwe beCFL.
ILuxembourg iya kwi-Ettelbruck Amaxabiso oololiwe
I-Ettelbruck ukuya kumaxabiso oLoliwe eJunglinster
EMersch ukuya eLuxux amaXabiso oLoliwe
Clervaux ukuya eLuxux Amaxabiso oololiwe
Ukuba ufundile ukuza kuthi ga ngoku, uyazi konke odinga ukukwazi malunga noololiwe be-CFL kwaye bakulungele ukuthenga itikiti lakho loliwe le-CFL kuhambo lwakho oluzayo Gcina A Isitimela.
SineeTikiti zokuqeqesha abaqhubi boololiwe:
NS yeNetherlands yamanye amazwe
I-SNCF TGV i-Lyria
I-Deutsche Bahn ICE yaseJamani
I-Deutsche Bahn yaseJamani
Ngaba uyafuna ukumisela eli phepha kwindawo yakho? Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-cfl%2F%0A%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela), Okanye unokuxhuma ngqo kweli phepha.
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml kwaye ungatshintsha i / de ku / nl okanye / fr kunye nezinye iilwimi.